Taliska qaybta Booliska Gobalka Nugaal oo ka waramay howl galo ka socda Garoowe.[Dhagayso]
Wed, 03/07/2018 - 10:32
Garoowe:-Taliska qaybta Booliska Gobalka Nugaal ayaa waxa uu saxaafadda uga waramay howlgalo ay Ciidamada amaanku ka sameeyeen magaalada Garowe ka dib markii ay maalmihii la soo dhaafay ay dhalinyaro tuugo ah ay waqtiyada habeenkii ka bilaaben magaalada in ay furtaan Mobilada.
Taliyaha Qaybta Booliska Gobalka Nugaal Gaashaanle Sare Faarax Cabdiraxmaan Warsame (Galangooli) ayaa xusay in ay ka hortageen falal lid ku ah amniga oo ay ku kaceen dhalinyaro koox koox ah oo ay geysanaya falal danbiyeedyo ay kula kacayaan shacabka.
Hoos ka Dhagayso waraysigaTaliyaha Qaybta Booliska Gobalka Nugaal Gaashaanle Sare Faarax Cabdiraxmaan Warsame (Galangooli)
Shirka Gar-gaarka Bini’aadannimo Soomaaliya oo London Ka Furmay
Tue, 03/06/2018 - 21:04
Magaalada London waxa maanta ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayo gargaarka bani’aadannimo ee Soomaaliya.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen diblomaasiyiin kala duwan matalaya dowladdo, deeq bixiyeyaasha, Qaramada Midoobay iyo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa looga hadlayaa mushkiladaha bani’aadannimo ee Soomaaliya ka taagan. Waxa sidoo kale looga hadlay sida loo xajin karo guulihiii laga gaaray ka hortagista macluul Soomaaliya ku dhufata sanadkii tagay.
Cabdixakim Maxamud Shirwac ayaa shirkan ka wareystay, wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Mon, 03/05/2018 - 17:28
Sun, 03/04/2018 - 15:18
Garoowe:-Sh.Maxamuud Xaaji Yuusuf oo Fariin u diray Shaqaalaha Idaacada BBC-da Soomaaliga isagoo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in idaacadda BBC-da Somaaliga ay buunbuuniso arrimo dhaawacay dhaqan iyo diinta bulshada Soomaaliyeed balse Sheekh ayaa u sheegay umada Soomaaliyed in Idaacadda BBC-da Soomaaliga ay tahay idaacadda ku hadasha afka-Soomaaliga balse aysan ahayn idaacada ay leeyihin shacabka Soomaaliyeed oo u ilaali naysa dhaqanka iyo diintooda Islaamka.
Hoos ka Daawo Sh-Maxamuud Yuusuf oo Fariin u diray Shaqaalaha Idaacada BBC-da Soomaaliga
Sat, 03/03/2018 - 16:29
Hargeysa:-Wasiirka Warfaafinta ee S/land Cabdiraxmaan Cabdilaahi Guri Barwaaqo oo la hadlay saxaafadda ayaa waxaa uu ka haday warsaxaafeed ka soo baxay dowladda fedraalka Soomaaliya kaas oo sharci daro ku tilmaamay heshiiskii ay kala saxiixdeen DP WORLD, Itoobiya & S/land,kuna saabsanaa dekkad magaalada Berbera.
Wasiirka Warfaafinta ee S/land C/raxmaan Cabdilaahi Guri Barwaaqo ayaa sheegtay in ay aad tahay wax laga xumaado warsaxaafadeed ka ka soo baxay dowladda Federaalka Soomaaliya, oo lagu joojinayo heshiiska ay wada gaareen S/land , DP WORLD iyo dalka Itoobiya laguna qayb sada saamiga dekkad Berbera.
Hoos ka Daawo shirka jar’aad ee Wasiirka Warfaafinta ee Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Guri Barwaaqo
Fri, 03/02/2018 - 22:34
Ra’iisul wasaare Kheyre ”Heshiiska Berbera qeyb kama nihin waana sharci darro.”[ Video]
Muqdisho:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu ka sharci daro ku tilmaamay heshiiskii Dekeda Berbera oo ay saamiga ku kala saxiixdeen Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, maamulka S/land iyo dowladda Itoobiya,
Hoos ka Dawo shirka Jaraa’id ee Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre
Dowladda Federaalka Soomaaliya” heshiiska lala galay Shirkada DP World waa sharci daro waana ka digeynaa”
Fri, 03/02/2018 - 11:32
Muqdisho:-Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay warsaxaafadeed ay kaga hadlayso heshiiskii maamulka S/land ee Dekeda Berbera ee ay la gashay shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta.
Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sharci daro ku tilmaamtay heshiiska Shirkadda DP World ay shalay ku dhawaaqday in heshiiska Dekeda Berbera saami dhan 19% ay ku yeelaneyso dowladda Itoobiya, Somaliland ay yeelaneyso 30%, halka shirkada DP World oo ah shirkada dhiseysa Dekeda ay qaadaneysa 51%.
Hoos ka eeg warsaxaafadeedka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ee dowladda Federaalka Soomaaliya
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 01 March 2018 xafiiskiisa kasoo saaray wareegtu lagu magacaabay Guddoomiyaha iyo Gudoomiye ku xigeenka ah ee kumeel gaarka ah ee Degmada Boosaaso
1. Waxaa Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan si ku meel gaara loogu magacaabay Guddoomiyaha Degmada Boosaaso.
Boosaaso:-Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 01 March 2018 xafiiskiisa kasoo saaray wareegtu ku saabsan kala dirid Golaha Deegaanka Degmada Boosaaso. Xeer Madaxweyne Lr. 31March 01, 2018, kuna saabsan Kala dirid Golaha Deegaanka Degmada Boosaaso.
1. Waxaa la Kala diray Golaha Deegaanka Degmada Boosaaso.
Garoowe:-Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taarikhdu tahay 28 Feb 2018 waxaa uu qasriga madaxtooyada ee Garoowe ku qaabiley wafdi balaaran oo uu hogaaminayey wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid iyo qunsulka safaarada masar ee Soomaaliya Taamir Safwat.
Wafdigaan balaaran ee maanta soo gaaray Puntland ayaa waxaa kamid ahaa masuuliyiin ka socotey Wasaaradda beeraha ee dalaka Masar, kuwaas oo ay kamid ahaayeen Madaxa mashaariicda beeraha ee wadamada Afrika Dr. Maahir Abdulmuncim, Axmed Qunaim-Madaxa xiriirka Dibada Wasaaradda Beeraha Masar, Dr. Attiya Mansuur- Khabiir Biyaha iyo Deegaanka.
Madaxweynah Dawladda Puntland oo kulan gaar kula qaatay xafiiskisa wafdigaasi marka ay soo gaareen qasriga madaxtooyada, ayaa kulankaas waxaa kala qayb galay Wasiirka Deegaanka Puntland, Wasiirka Xanaada Xoolaha Puntland, Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo waraabka Puntland iyo Saraakiil ka tirsan xafiiska Madaxweynaha.
Ugu danbeyn Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa qunsulka Dawladda Masar iyo wafdigii la socdey ee ka socdey Wasaaradda Beeraha ee Masar kula dar daarmey iney Puntland wax kala qabtaan nabaad guurka, xaalufinta deegaanka, daaweynta iyo nafaqeynta xoolaha, ka hortaga abaaraha iyo sidii mar kasta dadka abaaruhu aafeeyaan loogu gurman lahaa.